cusmaan | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 90
Howlgallo ka dhacay Muqdisho iyo Al-Shabaab oo sheegtay mas’uuliyadda.
Khasaaraha ka dhashey weerarkii ka dhacay dalka Iiraan oo sii kordhay.
Sarkaal katirsan Police-ka Puntland oo Gaalkacyo lagu dilay.
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ku waramaya in sarkaal sare oo katirsan Police-ka maamulka Puntland lagu dilay gudaha magaaladaas. Sarkaalka la dilay oo ahaa taliyaha saldhiga bartamaha ee magaalada Gaalkacyo, waxaa lagu magacaabaa Cali Ibraahim (Cali magafe). Ninkan ayaa caan ku ahaa inuu dhibaateeyo dadka muslimiinta ee sunnadu ka muuqato, isagoona xir xiri jiray kuna ...	Read More »
Oday dhaqameed lagu dilay magaalada Baraawe.
Rag hubeysan oo heebtooda aan la garan ayaa magaalada Baraawe waxay xalay ku dileen mid kamid ah Odoyaasha dhaqanka ah ee magaaladaas, kaas oo si wanaagsan looga garanayo magaalada. Nabadoon Siidana Xaajow ayaa rag hubeysan waxay ku dhex dileen isagoo maraya wadooyinka magaalada Baraawe, waxaana markii ay dilka geysteen kadib ay goobta uga tageen si nabad geliyo ay ku dheehantahay. ...	Read More »
Maraykanka Oo la filayo in Qudus uu u aqoonsado caasimadda Yahuudda.
Hadal maanta oo arbaco ah jeedin doono madaxweynaha cunsuriga ah ee Maraykanka ayaa la sheegayaa inuu ku shaacin doono markii ugu horaysay in magaalada barakeysan ee Al-Qudus ay tahay caasimadda maamulka Yahuudda. Saraakiil sar sare oo katirsan Aqalka cad ayaa warbaahinta u sheegay in Donald Trump hadalka maanta uu jeedin doono ku sheegi doono in Qudus ay tahay caasimad ay ...	Read More »
DhagaysoTaqriir: Cali Cabdalla Saalax…waxaa talada ka tuuray Kacdoon wadayaasha, waxaana dilay Xuuthiyiinta.
21-dii Maarso sanadkii 1942 ayuu ku dhashey Cali Cabdalla Saalax tuulada Beytul Axmar ee hoostagta magaalada Sanxaan ee gobolka Sancaa, wuxuuna kusoo koray nolol adag , marka loo eego qoyskooda oo faqiir ahaa, iyo waalidiintiisa oo kala tagay waqti uu isagu aad u yaraa. Marka laga hadlyo waxbarashadiisa, waxaa la sheegaa asal ahaan in yaraantiisa uu ahaa qowsaar Ari raac ...	Read More »
Dhagayso Xubinta Faa’iido 23
Xubinta Faa’iido waa qeyb kamid ah barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada ee Idaacadda Islaamiga ee Alfurqaan. Xalqadan waxaa jeedinaya Sheykh Yaxya Aala-Shalwaan, wuxuuna kaga hadlayaa qisooyin dhexmaray Xuurul Ceyn iyo rag Mujaahidiin ah, Idaacadda Alfurqaan ayaana Afsoomaali u tarjumtay. Halkan ka dhagyaso Qiso dhexmartay Mujaahidiin iyo XuurulCeyn Iyo Sheykh Yaxya Aala-Shalwaan	Read More »
Cali Cabdalla Saalax Oo Yaman lagu dilay.
Madaxweynihii hore ee dalka Yaman Cali Cabdalla Saalax ayaa maanta lagu dilay dalka Yaman, kadib markii uu ku dhacay weerar kamiin ah oo ay u dhigeen malleeshiyaad Xuuthiyiin ah. Isaga iyo tiro kamid ah mas’uuliyiinta xisbigiisa oo marayay meel 40 Km ka fog magaalada Sancaa ee caasimadda ah ayaa la dilay Cali Cabdalla Saalax, waxaana kolonyada uu la socoday joojiyay ...	Read More »
AMISOM oo dumarka Soomaaliyeed u aragta Qaniimo Dagaal! (Akhriso Warbixin)
Tan iyo markii ay ciidamada AMISOM soo galeen Soomaaliya sanaddii 2007-dii waxey abuurayeen aragtiyo kala duwan oo laga qaadanayay, dad ayaa u arkay kuwa badbaadinaya dadka iyo dalka Soomaaliya, iyaguna waxey isugu yeereen Ciidamo nabad ilaalin, dad kalena waxey u arkayeen cadow hor leh oo dhibaato ku ah Diinta, Dadka iyo Dalka. Si iyaguna ay u xaqiijiyaan iney yihiin dad ...	Read More »
DEG-DEG: Qarax culus oo ruxay Muqdisho xilli wadooyinka ay xiranyihiin.
Waxaa goordhow magaalada Muqdisho ee caasimadda ah ka dhacay qarax culus oo jugtiisa inbadan oo kamid ah magaalada laga maqlay. Qaraxa ayaa ka dhacay xarunta Villa Baydhabo oo ah talis weyn oo ay leeyihiin ciidamada milliteriga dowladda federaalka. Qaraxa oo ahaa noocyada gawaarida ayaa ka dhacay gudaha Xerada, waxaana la ogeyn halka uu gaarsiisanyahay khasaaraha ka dhashey. Qaraxan ayaa yimid ...	Read More »
Tobanaan Ruux oo ku dhintay duqeymo ka dhacay Dimishiq.
Wararka ka imaanaya dalka Suuriya ee sanooyinka xiriirka ah lagu dhibateynayo Muslimiinta ayaa sheegaya in diyaaradaha Nidaamka iyo kuwa Ruushka duqeymo xoogan ka geysteen deegaano dhaca duleedka magaalada Dimsihiq, kuwaas oo ka baxsan gacanta Nidaamka. Magaalooyinka Xamuuriya, Cabriin, Beytu Sawaa iyo Masraa ayaa marti geliyay inkabadan 30 duqeymo kuwaas oo si isku mid ah u beegsaday xaafadaha dadka shacabka ay ...	Read More »
Imaaraatka oo barakcin ku haya Qowmiyadda Canfarta ee Ereteriya, Waa fariin ku socota Shacabka Soomaaliyeed!! (Warbixin murugo badan). Akhriso+Dhagayso.
Ereteriya waa dal dhaca geeska Africa, waxaana caasimad u ah magaalada Asmara, inta ugu badan dadka wadankan oo lagu qiyaaso 4 milyan oo ruux waxay ku hadlaan luuqadda Carabiga, asal ahaan dalkuna waa dal Islaam, inkastoo sanadihii tagay lagu beeray kirishtaan badan, qiyaastii Musliminta waxaa lagu sheegaa 40% dadka guud ee wadanka. Bariga waxaa ka xiga badda cas, halka galbeedkana ...	Read More »
Page 90 of 163« First...607080«8889909192	»	100110120...Last »